Dagaal ooge xil loo magcaabay | allsanaag
Dagaal ooge xil loo magcaabay
Mid ka mid ah nimankii Macdanta Majayahan xasuuqa ku gaystay oo u qaabilsanaa dhanka sharciga maamulkii Cade Muuse . oo isaga oo sharciga si khaldan u isticmaalaya Boqolaal wiilal oo ka soo jeeda beesha Warsangeli xabsiyada Boosaso dhigay, si uu khayraadka degaanadooda u bililiqaysyo qaar kalena isaga oo shisheeye adeegsanaya kusheegay inay argagixiso yihiin, ayaa caawa loo magcaabay wasiirka macdanka iyo shidaalka Puntland.
Axmed Maxamed Yusuf Taaraan oo loo magcaabay Wasiirka Tamarta, Macdanta iyo biyaha ayaa xillxigii Majayahan la doonayey in macdanteeda xoog lagu qaato wuxuu ahaa Xeer ilaaliyaha gobolka Bari. Maalintii ugu yaraan Tobon qof oo ka soo jeeda beesha Warsangeli xabsi ayuu ku xukumi jiray iyaga oo waxba galabsan. Laga yaabee maanta qaarkood inay xabsiyada Puntland ku jiraan iyaga oo aan denbi gaysan
Qof kasta oo ka soo jeeda Maakhir oo ogaa falkii foolxumada ahaa oo ciidanka Puntland loo isticmaalay Majayahan iyo galgala maanta fursad baad haystaa aad ku diidi karto dagaal oogahan loo magcaabay in mar labaad bililiqaysyo macdanta Majayahan
← Dagaal ooge xil loo magcaabay Dagaal ooge wasiirka amniga loo magcaabay →